Teratany Alemanina avy any Glendora, Kalifornia nalaina an-keriny nataon'ny Minisiteran'ny Iran tany Dubai
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Teratany Alemanina avy any Glendora, Kalifornia nalaina an-keriny nataon'ny Minisiteran'ny Iran tany Dubai
Rehefa manidina Emirates Airlines avy any Los Angeles ka hatrany India, mila manova fiaramanidina ianao Dubai, UAE.
Mety hamoy ny ainy i Jamshid Sharmahd. Jamshid Sharmahd dia mizaka ny zom-pirenen'i Alemanina ary mpanao gazety monina any Glendora, California. Izy dia mponina ara-dalàna sy manana karatra maintso any Etazonia.
Ilay tanàna mampatory an'i Glendora, Kalifornia, dia tanàna iray tena azo antoka ao amin'ny San Gabriel Valley any amin'ny faritr'i Los Angeles, Kalifornia, 23 kilometatra atsinanan'ny tanànan'i Los Angeles. Tamin'ny fanisana tamin'ny taona 2010, 50,073 ny isan'ny mponina tao Glendora. Fantatra amin'ny anarana hoe "Pride of the foothills", i Glendora dia miorina eo an-tampon'ny havoanan'i San Gabriel.
I Sharmahd 65 taona dia voampanga ho an'ny Repoblika Islamika ao Iran amin'ny fikasana ny fanafihana tamin'ny taona 2008 tany amin'ny moskea namono olona 14 ary naratra maherin'ny 200. Izy koa dia voapanga ho nanao tetika fanafihana hafa tamin'ny alàlan'ny tsy fantatra Fivoriamben'i Iran sy ny elany mpitolona ao Tondar. Nandefa tafatafa iray tamina fahitalavi-panjakana io fanadihadiana io - sary izay nitovy tamin'ny fiheverana fa fanerena henjana noteren'ny governemanta Iraniana tao anatin'ny folo taona lasa.
Ny fianakaviany kosa dia nanitrikitrika fa mpitondra tenin'ilay vondrona fotsiny i Sharmahd ary tsy nisy ifandraisany tamin'ny fanafihana tany Iran. Sharmahd, izay manohana ny famerenana amin'ny laoniny ny fanjakan'ny mpanjaka Iran izay niongana tamin'ny Revolisiona Islamika 1979, dia efa nokendrena tamin'ny tetika famonoana iraniana iray tany amin'ny tanin'i Etazonia tamin'ny 2009.
Jamshid Sharmahd dia fampielezam-peo Iraniana-Amerikanina monina any Los Angeles ary zanaky ny fianakaviana Alemanina-Iraniana.
Avy any Los Angeles ho any India i Sharmahd hamonjy fifanarahana ara-barotra misy ifandraisany amin'ny orinasan-rindrambaiko. Manidina izy Emirates Airlines ary noterena hijanona alina any Dubai Nanantena ny hanana sidina mampifandray izy na eo aza ny aretina mikraoba mikraoba manelingelina ny dia an'izao tontolo izao.
Araka ny tatitra voaray, ny mponina ao Glendora dia nalain'ny Iran an-keriny raha mbola nijanona tao Dubai izy raha mbola nijanona tao amin'ny Hotely Premier Airport Dubai International Airport.
Ilay ahiahiana ho fakana an-keriny an'i Jamshid Sharmahd dia hita fa voamarina tamin'ny alàlan'ny angon-drakitra finday nozarain'ny fianakaviany tamin'ny Associated Press izay milaza fa nentina tany Oman mpifanila trano aminy talohan'ny nandehanany tany Iran.
Tsy nilaza ny fomba nitazomana an'i Sharmahd ny Minisiteran'ny Fampahalalana Iraniana, na dia nisy aza ny fanambarana miafina momba ny hetsika miafina nataon'ny Iran tao anatin'ny fifanenjanana mahery vaika tamin'ny Etazonia momba ny fifanarahana nokleary nataon'i Tehran tamin'ny firenena matanjaka.
"Izahay dia mitady fanampiana avy amin'ny firenena demokratika, firenena afaka," hoy ny zanany lahy Shayan Sharmahd tamin'ny AP. “Fanitsakitsahana ny zon'olombelona izany. Tsy afaka mandray olona fotsiny ianao amin'ny firenena fahatelo ary misintona azy ireo ho any amin'ny firenenao. ”
Nandà ny fisamborana azy tany Tajikistan ny minisiteran'ny fitsikilovana any Iran. Tamin'ny 30 Jolay, ny angon-drakitra fanarahana dia nanondro ny finday nandeha nankany amin'ny tanànan'ny seranan'i Omani, Sohar, izay nijanona ny famantarana.
Roa andro taty aoriana ny sabotsy, nanambara ny Minisiteran'ny Iran fa voasambotra tamin'ny raharaha "sarotra" i Sharmahd. Ny Minisiteran'ny sampam-pitsikilovana dia namoaka ny sariny efa nopetahany maso.
Nilaza ny zanany lahy fa mino izy fa amin'ny horonantsarin'ny fahitalavi-panjakana dia namaky maimaika izay rehetra tian'ny Ministeran'ny Iran holazaina i Sharmahd.
Mino ireo tompon'andraikitra tandrefana fa manao raharaham-pitsikilovana any Dubai i Iran ary mitazona hatrany amin'ireo Iraniana aman-jatony monina ao amin'ny fanjakan'ny tanàna. Iran dia ahiahiana ho naka an-keriny ary avy eo namono ilay teratany anglisy-Iraniana Abbas Yazdi tany Dubai tamin'ny 2013 na dia nandà ny fidirana an-tsehatra aza i Tehran.
Tsy i Iran irery no mitazona ny fisian'ny Dubai ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra, fonenan'ny tafika amerikana 5,000 eo ho eo sy ny seranan-tsambo antso avo indrindra ataon'ny tafika amerikana ivelan'i Amerika. Ny Departemantam-panjakana amerikana dia mitantana ny birao misy ny faritra misy azy any Iran any Dubai izay manara-maso ireo tatitra momba ny fampahalalam-baovao Iraniana ary miresaka amin'ny Iraniana.
Ireo hotely ao Dubai dia nokendren'ny mpiasan'ny faharanitan-tsaina hatry ny ela, toy ny famonoana olona nataon'ny polisy Israeliana Mossad of Hamas Mahmoud al-Mabhouh tamin'ny 2010. Dubai sy ny sisa amin'ny UAE dia nanam-bola bebe kokoa tamin'ny tambajotram-panaraha-maso feno.
Efa ela ny UAE no nanandrana nanatsara ny fifanenjanana tamin'i Iran taorian'ny fampielezan-kevitry ny tsindry faran'ny filoha Donald Trump nahita azy nisintona tamin'ny fifanarahana nokleary. Ny alahady teo dia nanao valan-dresaka tamin'ny minisitry ny raharaham-bahiny Iraniana Mohammad Javad Zarif ny minisitry ny raharaham-bahiny Emirati, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.
Amin'izao fotoana izao dia nilaza ny fianakavian'i Sharmahd fa nifandray tamin'ny governemanta tany Allemà izay toerana itondrany ny zom-pirenena sy ny governemanta amerikana izy, satria efa an-taonany maro tany Etazonia izy ary teo am-pelatanan'ny zom-pirenena taorian'ny drafitra famonoana tamin'ny 2009.
Ny Masoivoho Alemanina ao Tehran dia nangataka tamin'ny manam-pahefana iraniana hanana fidirana kaonsily, hoy ny Minisiteran'ny raharaham-bahiny any Berlin, nanantena ny hahatakatra ny fomba nisamborana an'i Sharmahd. Na izany aza, tsy avelan'i Iran hiditra amin'ny consular ireo teratany roa sosona, raisina ho olom-pirenena Iraniana ihany.
Ny Departemantam-panjakana, izay nanondro an'i Sharmahd tamin'ny tatitra teo aloha fa olom-pirenena amerikana, dia nanaiky ny fisamborana azy ary nilaza fa i Iran “dia efa ela no nitazomana ireo Iraniana sy teratany vahiny noho ny fiampangana diso nataony.”
Hoy ny tatitra navoaka tao amin'ny TV Iraniana:
Ny minisiteran'ny sampam-pitsikilovana ao Iran, izay nanambara vao haingana ny fisamborana ilay mpitarika ny vondrona mpampihorohoro iray miady amin'ny Iran, dia nandà ny tatitra milaza fa tratra tany Tajikistan io olona io.
Ireo “tatitra dia“ nolavina boribory ”, hoy ny Minisitra tamin'ny fanambarana izay notsipahin'nny Tasnim News Agency tamin'ny Alahady.
Ny fanambarana navoakan'ny biraon'ny fifandraisana amin'ny daholobe dia ny loharanom-pahalalana ofisialy amin'ny antsipiriany momba ny asa ataon'ny mpiasan'ny minisitera, hoy ny fanambarana.
Nanambara ny Minisiteran'ny fisamborana an'i Jamshid Sharmahd, tompon'andraikitra amin'ny akanjon'ny Tondar (Thunder), izay fantatra amin'ny anarana hoe "Assembly of Iran," tamin'ny sabotsy, ary nampahafantatra fa izy no nibaiko ny "hetsika mitam-piadiana sy ny asa fanaovan-tsoa" ao Iran Etazonia taloha.
Ny Dikanteny Iraniana
loharano: Press TV Iran
Nanambara ny Minisiteran'ny fisamborana an'i Jamshid Sharmahd, tompon'andraikitra amin'ny akanjon'ny Tondar (Thunder), izay fantatra amin'ny anarana hoe "Fivoriamben'ny Fanjakana Iran" tamin'ny sabotsy, ary nampahafantatra fa nitantana ny "hetsika mitam-piadiana sy ny asa fanaovan-tsoa" ao Iran izy avy amin'ny Etazonia taloha.
Tamin'ny fisamborana azy dia nanaiky i Sharmahd fa nanome zava-baomba ho an'ny fanafihana tamin'ny 2008 tany atsimon'i Iran ka nahafatesana olona 14.
"Nantsoina aho talohan'ny nanombohana ny baomba," hita izy nibaboka tamin'ny sary natolotry ny Islamic Republic of Iran News Network tamin'ny andro atoandro.
Ny fanafihana nikendry ny moske Seyyed al-Shohada tao an-tanànan'i Shiraz dia naharatrana olona 215 hafa koa.
Araka ny filazan'ny Minisitra, nikasa ny hanao fanafihana mahery vaika ary mety hamono olona mahafaty manerana ny Repoblika Islamika ity vondrona ity, saingy sosotra tamin'ny fikasana natao noho ny asa fitsikilovana sarotra kendrena nikendry ilay akanjo. Anisan'izany ny fipoahan'ny Sivand Damn tao Shiraz, fanapoahana baomba feno sianida tao amin'ny tsenaben'ny boky iraisam-pirenena ao Tehran, ary fanatanterahana fipoahana nandritra ny famoriam-bahoaka tao amin'ny Mausolea an'ny mpanorina ny Repoblika Islamika, Imam Khomeini.
Ny antsipirian'ny fisamborana
Nandritra izany fotoana izany, ny Minisitry ny fitsikilovana Mahmoud Alavi dia niarahaba ireo mpiasan'ny Minisitera tamin'ny fahombiazany tamin'ny fisamborana ilay mpitarika ny mpampihorohoro, tamin'ny antsipiriany momba ny toe-javatra manodidina ny hetsika.
Sharmahd dia nankafy ny "fanohanana matotra" avy amin'ny sampam-pitsikilovana amerikanina sy israeliana, izay "nihevitra ho lavitra izany mba hahafahan'ny minisiteran'ny faharanitan-tsaina iraniana hiditra ao amin'ny fonosam-pitsikilony ary hametraka azy eo ambany fahefany amin'ny alàlan'ny asa sarotra iray," ny minisitra hoy izy.
Mbola mino ny Amerikanina fa ny sary mampiseho an'i Sharmahd any Iran taorian'ny nisamborana azy dia nalaina an-keriny tany ivelan'ny Repoblika Islamika, hoy izy nanampy hoe: "Ho hitan'izy ireo ny zava-drehetra [mikasika ny hetsika] atsy ho atsy."
Nampiavaka an'i Alavi ny fitafian'i Sharmahd sy ireo vondrona antsoina hoe Royalista hafa, izay ny ankamaroany dia mampiasa kabary sy fanambarana hanandrana hampiorina ny tenany.
Tondar "no hany hetsika nahery setra indrindra ary taorian'ny nananganana tena tamin'ny alàlan'ny asa fampihorohoroana," hoy ny minisitra.
Nampiandany Iran ny ops 27 nataon'i Tondar
Nanamarika i Alavi fa naharesy lahatra ny asa aman-draharaha 27 nataon'i Sharmahd sy ny tariny ny Minisitera.
Ny minisitra indray dia nanome naoty ambony ny fisamborana, raha tsiahivina ny fanamarihana nataon'i Sharmahd teo aloha izay nandraisany tena tsara tamim-pitiavana tao amin'ny Birao Federalin'ny Fikarohana Amerikanina.
"Heveriny ho nipetraka teo amin'ny rihana fahenina tao amin'ny tranobe FBI ny toerany," ary ankehitriny dia hitany fa voafehin'ny mpiasan'ny sampam-pitsikilovana Iraniana izy, hoy i Alavi.
Taorian'ny fanafihan'ny mpampihorohoro tany Iran dia nampandrenesin'ny Repoblika Islamika ny momba an'i Sharmahd ary nitaky ny fisamborana azy. Na izany aza, dia mbola hanao dia an-kalalahana amin'ireo firenena manana ny tena maha izy azy izy.
Nilaza i Alavi fa ny tsy fandraisana andraikitra na eo aza ny fitarainan'i Tehran dia “manondro ny tsy fahambonian'ny Amerikanina sy ireo mpiara-dia aminy eropeana miady amin'ny fampihorohoroana.”
Niarahaba ny minisitry ny farany fa ny fisamborana dia "mbola tsy ary tsy ho" ilay hetsika sarotra natao voalohany nataon'ny mpiasan'ny sampam-pitsikilovana Iraniana, ary nanamafy fa "nanao fisamborana toy izany izy ireo taloha, ny fotoana tokony hanazavana izay tsy nefa tonga. ”
Iza moa i Jamishid Sharmahd
loharano: Assembly of Iran
Andriamatoa Jamshid Sharmahd dia teraka tamin'ny 23 martsa 1955 tao Tehran. Lehibe tao amin'ny fianakaviana Alemanina-Iraniana izy.
Nandritra ny vanim-potoanan'ny fianarany talohan'ny nahazoany diplaoma dia nifindra nifandimby teo amin'i Alemana sy Iran izy.
Tamin'ny 1983, nandritra ny tabataba tamin'ny famaranana ny ady tany Iran-Iràka sy ny famonoana olona maro mpanohitra ara-politika, dia nifindra tany Alemana izy farany, ary nipetraka niaraka tamin'ny vadiny sy ny zanany vavy iray taona izy.
Tamin'ny 1989 dia nahavita ny mari-pahaizana momba ny haitao elektrika sy ny haitao fampahalalana tany Alemana izy. Ny asany dia natomboka tamin'ny tetik'asa mandeha ho azy ho an'ireo orinasa eropeana iraisam-pirenena toa an'i Siemens AG, Bosch, Volkswagen, European Aeronautic Defense and Space Company EADS NV, sy ny hafa.
Tamin'ny 1997 dia nanangana orinasany manokana izy "Sharmahd Computing GmbH" izay mifantoka amin'ny famolavolana sy fampandrosoana ny lozisialy ho an'ny elektronika sy ny indostrian'ny fiara.
Jamshid Sharmahd no mpanoratra ny tonian-dahatsoratry ny lahatsoratra miasa voalohany mifototra amin'ny fenitry Unicode. Ity rindrambaiko ity (SC UniPad) nanampy ny mpandrindra Internet an'arivony erak'izao tontolo izao hamorona sy hitantana vavahady fampahalalana amin'ny fiteny maro amin'ny fiandohan'ny taonjato faha-21.
Ao amin'ny 2002 “Computing Sharmahd” mahazo toerana faharoa any Los Angeles, Kalifornia, hanompoany tsara kokoa ny mpanjifany amerikanina.
Tamin'ny 2003, Jamshid Sharmahd, ny vadiny ary ny zanany roa dia nifindra monina tany amin'ny trano vaovao tany Los Angeles.
Nipetraka tao amin'ny tanàna iray be mponina any Iran, Jamshid Sharmahd dia nahafantatra ireo mpiaro ny fahalalahana Iraniana tia tanindrazana sy ireo monarchista izay manohitra ny fitondrana Islamika ao Iran.
Ilay vondrona nahasarika ny fahalianany indrindra dia “Anjoman-e Padeshahy-e Iran” na ny “Assembly of Iran.” Vetivety dia nazava taminy fa ny filozofia tokana misy an'ity vondrona ity, izay tsy nisy fanatisma na firehana nasionaly, dia nifanaraka tamin'ny heviny sy ny soatoaviny. Ny tanjon'izy ireo ara-politika dia nahafaly ny filan'ny fiarahamonina Iraniana maoderina sy ny lalàna maoderina. Noho izany dia natombony ny fiaraha-miasa tamin'ny fahitalavitra Satellite (vondrona fahitalavitra) an'ity vondrona ity sy ny Dr. Forood Fouladvand mpampiantrano azy.
Ity gara ity dia nanohina ary navoaka ho an'ny lohahevitra voalohany toy ny fanombanana ny fiaviany Silamo sy ny tantaran'ny Moyen Orient, ny filàna governemanta laika, ny fitovian'ny miralenta, ny fifantohana amin'ny zon'ny foko vitsy an'isa, ny fahalalahan'ny finoana ary ny fahalalahana miteny ary hevitra, ary nanamafy fa ireo soatoavina ireo dia miorim-paka lalina amin'ny kolontsaina sy ny toe-tsaina Iraniana.
Miorina amin'ny fahaizany matihanina amin'ny teknolojia Internet, nanangana ny tranokala tondar.org ho toy ny fikambanana politika sy fitaovana fanaovana dokam-barotra izy tamin'ny taona 2004. Ity tranonkala ity dia nanjary fitaovana ilaina amin'ny famoahana ireo fandaharana politika sy fampielezana hevitra, fa natao koa ho teboka lehibe sy azo antoka ny fifandraisana amin'ireo mpiady amin'ny fanoherana avy any Iran ary mbola ampiasaina ho an'ireo tanjona ireo ankehitriny.
Tamin'ny 2007, Jamshid Sharmahd sy ny mpiara-miasa aminy sasany no nanangana ny onjam-peo “Radio Tondar” izay nandefasany ny fandaharana momba ny politika sy fanabeazana nataony tamin'ny alàlan'ny tobin'ny zanabolana sy tamin'ny Internet.
Ireo fandaharana ireo dia nahitana fanombanana manan-tantara sy ara-politika ary koa fampianarana momba ny teknika ady.
Ireo mpiady za-draharaha dia nanana fotoana hizarana ny fahalalany tamin'ny hafa tamin'ny alàlan'ity loharano ity.
Tao anatin'izay 3 volana manaraka izay dia nahasarika ny sain'ny tanora Iraniana mpiady ny onjam-peo ary nivadika ho tribonaly malalaka ananan'izy ireo ny fomba politika samihafa.
Ny fientanan'ny tanora amin'ity haitao ity dia tsy voamariky ny fitondrana Islamika, izay naneho ny fihetsik'izy ireo avy hatrany taorian'ny ora vitsy nandefasana.
8 volana teo ho eo taorian'ny namoahana ny fanapoahana baomba ny foiben-toeran'ny Basij ao Shiraz tamin'ny alàlan'ny onjam-peo dia namorona fitsapana fampisehoana tsy nisy gazety maimaimpoana na karazana mpanolotsaina ara-dalàna ny fitondrana Islamika, voatondro hanome tsiny ny hetsika ireo mpiasan'ny Radio Tondar .
Ny anaran'i Jamshid Sharmahd dia voatonona amin'ity fitsarana ity, izay nanameloka ho faty ny mpianatra roa avy ao Shiraz sy mpiasa iray avy any avaratr'i Iran.
Herinandro taty aoriana, narahina ny famonoana azy ireo nefa tsy nisy fotoana hiarovan-tena ara-dalàna. Ny fitondrana Islamika dia nanambara an'i Tondar ho "fahavalony voalohany" ary nanenjika ny mpikambana ao aminy.
Tamin'ny sehatra diplaomatika dia natolotr'i Iran an'i Tondar ho fitaovana tandrefana, indrindra ny Amerikanina, izay tandindomin-doza ny fisian'ny Repoblika Islamika.
Taorinan'ny fihetsiketsehana taorian'ny fifidianana tamin'ny taona 2009 sy ny famoahana teknikan'ny ady sy fiarovana mahasoa an'ny Radio Tondar, dia vao mainka nanaratsy ny fampielezan-keviny tamin'ny mpandraharaha ny onjampeo, indrindra ny fanoherana. “Iman Afar” ary "Jamshid Sharmahd."
Betsaka ny fandaharana amin'ny fahitalavitra manohitra azy ireo no natsangana ary nalefa tamin'ny fahitalavitra Iraniana nasionaly, ny Internet, ary ny tobin'ny zanabolana an'ny Repoblika Islamika "Press TV."
Fitsarana fampisehoana iray hafa no nokarakaraina tamin'ny taona 2009, izay mpikambana 11 ao Tondar no voampanga ho nandray anjara tamin'ny korontana taorian'ny fifidianana. Amin'ireo mpanohitra 100 izay nosamborina tamin'ny fihetsiketsehana tany am-boalohany dia 2 ihany no novonoina ho faty. Ireo 2 ireo dia “Mohamad Reza Alizamani” ary “Arash Rahmanipour” izay samy mpikambana mavitrika ao Tondar ary niara-niasa akaiky tamin'i Jamshid Sharmahd tamin'ny famokarana sy fandefasana ireo fandaharana amin'ny radio.
Ny fanafihana fampihorohoroana nataon'ny fitondrana Islamika hampanginana ny fanoherana sy ny fihetsiketsehana dia tsy mijanona ao anatin'ny Iran ihany. Mba hampitsaharana ny asan'ny Tondar, kendren'ny fitondrana ny mpitondra sy mpitantana ny Tondar. “Mohamad Reza Sadeghnia” dia nosamborina ary nogadraina tamin'ny 28 Jolay 2009, noho ny fampihorohoroana an'i Jamshid Sharmahd any Los Angeles.
Nanomboka ny fanandramana fanindroany hampanginana ny feon'ny onjam-peo ny IRI tamin'ny fiampangana ny fanafihan'ny mpampihorohoro an'i “Masoud Ali-Mohamadi,” profesora oniversite fizika any Iran, amin'ireo mpandraharaha ny Radio Tondar ary nampandre ny masoivoho soisa ao Tehran fa izy ireo mitady ny famoahana ireo mpikambana ao amin'ny vondrona Tondar any Los Angeles. Nolavin'ny manampahefana amerikana io fangatahana io ho tsy misy dikany.
Jamshid Sharmahd dia manohy am-pahombiazana amin'ny fandefasana radio isan-kerinandro amin'ny alàlan'ny Radio Tondar ary mampiroborobo ny hetsika ataon'ny mpanohitra sy ny mpiady fahalalahana ao Iran amin'ny alàlan'ny Internet Portal tondar.org.
Korean Air dia mandefa programa fanabeazana momba ny fiarovana
Ny fanapahana ny asan'ny Booking Holdings dia mampiseho ny fitohizan'ny mpiasan'ny dia